တရားဝင်တားမြစ်ထားတဲ့ ကမ္ဘာတစ်လွှားက အစားအစာ (၅) မျိုး | yathar Magazine
တရားဝင်တားမြစ်ထားတဲ့ ကမ္ဘာတစ်လွှားက အစားအစာ (၅) မျိုး
ဒီဇင်ဘာ 17, 2020
ကျွန်တော်တို့နေ့စဥ် စားသောက်နေကြတဲ့ အစားအစာတွေထဲကမှ တချို့အစားအစာတွေကို စားသောက်ခွင့်မရှိတော့ရင် ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ?
ဘာလေးနဲ့တွဲစားစား အရမ်းအရသာရှိတဲ့ Ketchup sauce တွေ အပျင်းပြေဝါးစရာ ပီကေတွေ အီစိမ့်နေတဲ့ ပြင်သစ် cheese တွေ ဒါတွေမရှိဘဲ သင်နေနိုင်မလား?
ဒါပေမဲ့ သင်နေထိုင်တဲ့နိုင်ငံပေါ် မူတည်ပြီးတော့ ဒါတွေကို မစားရရုံအပြင် သင့်မှာရွေးချယ်စရာ မရှိပါဘူး။
အခုဖော်ပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ ကမ္ဘာပေါ်က တချို့နိုင်ငံတွေမှာ တားမြစ်ခံထားရတဲ့ အစားအစာတွေအကြောင်းပါပဲ။ တားမြစ်ရတဲ့ တချို့အကြောင်းအရာတွေက အံ့အားသင့်စရာကောင်းတာမို့ ဒီဆောင်းပါးထဲမှာ ဆက်ပြီးတော့ ဖတ်ရှုပေးကြပါ။
ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ ကျောင်းတွေမှာတော့ ကျောင်းသားတွေက Ketchup sauce ကို စားခွင့်မရှိပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကလေးတွေကို ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ ရိုးရာဟင်းချက်နည်းတွေနဲ့ ဝေးကွာသွားမှာစိုးလို့ပါတဲ့။ Hotdog တွေမှာဆိုရင် Ketchup sauce အစား ခရမ်းချဥ်သီးအနှစ်နဲ့ပဲ စားရပါတယ်။ ။ ပြင်သစ်ကလေးတွေအနေနဲ့တော့ တစ်ပတ်မှာတစ်ခါသာ အာလူးချောင်းကြော်ကို Ketchup sauce နဲ့ စားခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒီတားမြစ်ချက်ကို ၂၀၁၁ ကတည်းက စတင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်
ရုရှားနိုင်ငံကတော့ ၂၀၁၇ ဥပဒေအရ နိုင်ငံခြားဖြစ် cheese တွေ တင်သွင်းရောင်းချမှုကို တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတွင်းက cheese ထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လူတွေကတော့ ဒီတားမြစ်ချက်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မကျေမနပ်ဖြစ်ခဲ့တာမျိုးတော့ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ရုရှားနိုင်ငံမှာတော့ ပြင်သစ် cheese ရဲ့ အရသာကို ခံစားနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
စင်ကာပူနိုင်ငံကတော့ ၁၉၉၂ ကနေစပြီးတော့ ပီကေစားတာကို တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မြို့တော်ရဲ့ လမ်းမတွေကို ပီကေတွေနဲ့ မညစ်ပတ်စေချင်လို့ ဒီဥပဒေကို ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ ဒီလိုတင်းကြပ်တဲ့ စည်းကမ်းတွေကြောင့် စင်ကာပူနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အသန့်ရှင်းဆုံးမြို့တွေစာရင်းထဲ ဝင်ခဲ့ပါတယ်။
Jamaica နိုင်ငံ ရဲ့ national fruit ဖြစ်တဲ့ Ackee လို့ခေါ်တဲ့ အသီးကို အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတော့ မြင်တွေ့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မမှည့်သေးတဲ့ Ackee အသီးတွေမှာ Hypoglycin A, B ဓာတ်တွေ မြင့်မားစွာ ပါဝင်တာကြောင့် ဒီအသီးတွေကို စားမိရင် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဂလူးကို့စ်ထုတ်လုပ်ပေးမှုကို အလွန်အမင်းလျော့ကျစေပြီးတော့ ကိုမာဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ အသက်အန္တရာယ်ရှိတာကြောင့် FDA ကနေ ၁၉၇၃ ခုနှစ်ကတည်းက ဒီအသီးတွေ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ရောင်းချမှုကို ပိတ်ပင်ထားခဲ့ပါတယ်။
ဆိုမာလီနိုင်ငံကတော့ ထူးထူးဆန်းဆန်းအနေနဲ့ စမူဆာကို တားမြစ်ထားပါတယ်။ ဆိုမာလီနိုင်ငံက မွတ်ဆလင်အစွန်းရောင် အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ al shaahab အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ စမူဆာရဲ့တြိဂံ ပုံသဏ္ဍာန်က ခရစ်ယာန်အယူဝါဒတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Trinity sign နဲ့တူနေလို့ဆိုပြီးတော့ နိုင်ငံတွင်း စမူဆာစားသုံးခြင်းကို ပိတ်ပင်တားဆီးထားပါတယ်။ al shaahab အဖွဲ့ဆိုတာကတော့ အယ်လ်ကိုင်ဒါတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပါ။ ဆိုမာလီနိုင်ငံမှာတော့ စမူဆာပြုလုပ်တာ ရောင်းချတာ စားသုံးတာ တစ်ခုခုကို တွေ့ရှိခံခဲ့ရမယ်ဆိုရင်တော့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် အပြစ်ပေးခြင်းကို ခံရနိုင်ပါတယ်။ ဆိုမာလီနိုင်ငံမှာတော့ စမူဆာတစ်ခုကြောင့် ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်ကနိုင်ငံတွေမှာသာမက ကမ္ဘာ့အပြင်ဘက်မှာလည်း တားဆီးထားတဲ့အစားအသောက်တွေ ရှိပါသေးတယ်။ သင်ဟာ အာကာသထဲကို အလည်အပတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ဆားနဲ့ ငရုတ်ကောင်းကို စားလို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆားနဲ့ ငရုတ်ကောင်းအမှုန်လေးတွေက ကမ္ဘာ့ဆွဲအားမရှိတဲ့ အာကာသထဲမှာ လွင့်ချင်ရာကို လွင့်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒီအမှုန်လေးတွေက တခြားလူတွေမျက်လုံးထဲဝင်ရင် ဒုက္ခကောင်းကောင်းပေးနိုင်တာကြောင့် အာကာသထဲမှာ အစားအစာတွေအပေါ် ဆားနဲ့ ငရုတ်ကောင်းဖြူးပြီးတော့ စားသုံးတာကို တားမြစ်ထားပါတယ်။
ကဲ ဒီတော့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှာ ထူးထူးခြားခြား တားမြစ်ခံထားရတဲ့ အစားအသောက်တွေ အကြောင်းဖတ်ပြီးတော့ ဗဟုသုတရနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်နော်။ အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကတော့ ဆိုမာလီနိုင်ငံထဲကို စမူဆာသယ်မသွားမိဖို့ပါပဲနော်။
ညညအိပ်မရတဲ့အခါ ကြာလာရင် ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ
ညညဆို အိပ်ပျော်အောင် ဘာတွေစားသင့်လဲ